Home News Qaar ka mid ah Golaha Wasiiradda R/wasaare Kheeyre oo la ogaaday in...
Qaar ka mid ah Golaha Wasiiradda R/wasaare Kheeyre oo la ogaaday in aysan soo xaadirin Xafiisyadda!!
Qaar Golaha Wasiirada Xukuuumada Federaalka Somaaliya ayaanan sooxadiri kulama muhiim u ah oo ay xukuumada kadoodeyso ajandayaal dalka wax gal u ah.
Xogo hoose oo aan heleyno ayaa sheegaya in ilaa iyo 5 wasiir aysan soo xaadirin kulamada golaha ay yeelanayaa taasi oo dhabar jabku ah howlaha laga sugaayay wasiirada iney ka qabtaan wasaaradaha ayka howlgalaan.
Xukuumada uu horkacayo kheyre ayaa dhowr mar waxa ayka dhawaajisay iney la dagaalami doonto musuq maasuqa iyo inlala xisaabtami doona masuuliyiinta gudan waaya waajibaadkooda.
Sikastaba ha ahaate wasiiro aanan usoo xaadireeyn kulamadii iyo xafiisyadoodii maxay tahay waxqabadka laga sugayo
Previous articleMadaxda Sare Ee Dalka oo Cabsi ka qabo Shir Kismaayo ka dhacaayo!!
Next articleGudoomiyaha Gobolka Banaadir oo Xaaladu ku xun-tahay
Nin Soomaali ah oo lagu eedeeyay in uu gowracay ...